Sidee loo hagaajiyaa khaladaadka dpkg: digniin: `` ldconfig '' ee Tijaabada Debian | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo hagaajiyo khaladaadka dpkg: digniin: `` ldconfig '' ee Tijaabada Debian
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Maanta waxaan go’aansaday inaan ku laabto Tijaabada Debian. Maadaama dhibaatadu ka jirtay Kernel sida muuqata, si fiican ayaan uga tagay midka keena Tuuji rakibay oo cusbooneysiiyay xirmooyinka kale.
Waan cusbooneysiinayay Cilmi-baarista markii aan xaqiiqsaday inay waqti dheer qaadatay oo ku dhegtay markii aan isku dayay inaan marin u helo. Waxaan ku dilay howsha qunsuliyada waana orday:
Si loo dhammeeyo qaabeynta xirmooyinka maqan, laakiin: Yaab !!! Waxaan helay qalad ii sheegay:
Markaas maxaan qabannaa? Gudaha Linuxmint-Isbaanish xalka na sii.
Waxaan furey a terminal sida xidid iyo saaray:
Si aan ugu hagaajino nidaamka waxaan haysanaa laba ikhtiyaar. Waxaan ku darnaa faylka / etc / sudoers Khadadka soo socda:
Mise gudaha ayaynu dhigeynaa .bashrc:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida loo hagaajiyo khaladaadka dpkg: digniin: `` ldconfig '' ee Tijaabada Debian
Waxaan u maleynayay in Debian uu marti u yahay aayadda oo uusan weligiis guuldareysan HAHAHAHAHA
Dhab ahaan, waxaan ka hadlaynaa Imtixaanka Debian, halkaasoo wax waliba ku dhici karaan (in kasta oo ay naadir tahay) ... Haddii aadan khaladaad rabin, markaa isticmaal Stable.
Fuck ... aad u qurux badan
Isu uruursiga waxaa loogu talagalay ku noolaanshaha si nabad ah, Tijaabadu waa tijaabinta iyo SID waa geesinimada
Ku jawaab Yukiteru Amano
hahahaha oo soo jeedinaysa isla aayadda mar aan aqriyay hareeraha "Slackware the distro kaliya ee hartay ragga" hahahahaha
Nacalad, ii sheeg waxay rabaan .. Waxaan u adeegsadaa Debian, Fedora, Arch, openSUSE, Centos (sida ay u kala horeeyaan) Slackware ama Gentoo ka hor ..
Hahaha runtii debian xasillooni darro ayaa runtii deggan.
xitaa ha oran sidaas Elav, maanta kama dhaqaaqi doono LMDE.
Hehehe. Had iyo jeer waxaan dib ugu noqdaa hooyada distro. LMDE waa hagaagsan tahay, laakiin marwalba waxaan ubaahanahay inaan rakibo wax kasta oo ka soo baxa, iyo kaliya waxaan u baahanahay. In kasta oo dabcan, marwalba waxaan u isticmaalaa bakhaarka LMDE waxyaabaha qaarkood.
Haha si fiican ayaan ula noolahay iskudhafka tijaabada iyo xasilloonida. Hada wax dhib ah maleh waxaan ahaa 6 bilood aniga oo aanan dib u rakibin haha.
Guud ahaan, Sid wuu ka xasilloon yahay Ubuntu iyo Arch, maxaa intaas ka sii badan, waxaan u maleynayaa in xasillooni-darrida ay ka deggan tahay labadaas ... 😛
Ha ka badbadin… Xasillooni darro ayaa ka deggan Arch? Hagaag, weligey dhibaatooyin xasilooni ah kalama kulmin Arch, kaliya bug yar oo kuyaala Nepomuk oo lagu hagaajiyay KDE 4.7.2, iyo Xasillooni la'aan ayaa hubaal ah inay ka taxaddar yar tahay ama la safeeyay
Deganaansho la'aantu waa isla Arch. Xaqiiqdii, Arch ayaa ka sii xun, maxaa yeelay wixii soo baxa horay ayaa loo cusbooneysiiyay, xasilloonida maahan sidaas.
Arch waa mid ka mid ah kuwa ugu xasiloon, sidoo kale iyagu ma cusbooneysiiyaan sida aan loo dhejin, haddii wax ay yihiin beta, ma dhigaan.
Kooxda Arch kooxdu mindi kuma saaraan qof walba qoortiisa si uu u dhaqaajiyo Tijaabada
Waligey dhibaatooyin xasiloonida kalama kulmin Arch
Maxay ugu yeeraan Beta? Sababtoo ah maanta KDE waa "xasilloon tahay" maantana waxay ku jirtaa bakhaarrada Arch. Iyo sidaas oo kale dhammaan baakadaha kale .. Marka fadlan qeex inay adiga adiga kuu tahay xaqiiqda ah inay tixgelinayaan wax beta ah.
Waxaa jira repo tijaabo ah oo loogu talagalay Arch, halkaas baakadaha ayaa galaya xilligan. Kadib dhowr saacadood oo tijaabooyin ah, mararka qaarkood maalmo (haa, maalmo ... laga yaabee inaad ilaawdo in KDE 4.7 ay qaadatay mudo hal usbuuc ah in lagu galo xasiloonida xasilloonida) xirmadaas waxaa loo dhigaa meel xasiloon.
Ha isku dayin inaad i qanciso. Waqtigaaga waad lumisaa.
HAHAHAHAHA Ma doonayo HAHAHAHA, qofna wax iima siin doono wax ka badan ama ka yar si aan kuu isticmaalo Arch ama wax la mid ah LOL !!!!!
Waan ka wada hadli karnaa waqti aan la cayimin, waan ogahay habka loo joojiyo tan laakiin waad aqbali weyday markii aan soo jeediyay ... way fududahay (hadana waan idin xasuusinayaa), waxaad isticmaali doontaa Debian Unstable anigana waan sii wadi doonaa isticmaalka Archkayga , waana arki doonaa OSkee ka xasillooni daran kan kale 😉
Maxaad tidhi? You… ma aqbashaa sharadka? 😉
Uma isticmaalo Debian Unstable xaqiiqda fudud ee ah inaanan qorsheyneynin inaan noloshayda ku qaato cusbooneysiinta internetka. Waan ku faraxsanahay meelaha Keydka Imtixaanka ee maxaliga ah. Waxaan arki doonaa maalinta ay tahay wax aan macquul aheyn in lagu socdo sida aad u cusbooneysiineyso Ñej Ñej Ñej have Mana ahan inaan ogaado midkee xasiloon. Hore ayaan u ogahay taas: Debian.
Dabcan dabcan ... waa sida ay yiraahdaan, ma jiro indhoole ka xun midka aan dooneynin inuu wax arko, sax? LOL.
Sikastaba, muhiimadu waa inaad ku faraxsanaato walxaha uu qof walba adeegsado, in kastoo aadan ka daalin dhaleeceynta Arch (adoo ku saleynaya shuruudahaaga shaqsiyeed), waan jeclahay…… la macaamil. LOL !!!
Capricho waa waxa lagu garto adiga. Waad ogtahay in sababta kaliya ee aad u isticmaasho Arch, ay tahay sababta oo ah sida aad adigu leedahay, KDE waxay ka shaqeysaa halkaas si ka wanaagsan wixii kale ee aad isku dayday. Ma ihi indhoole, waxaan isku dayay qaybinta intaa ka sii badan adiguna waad ogtahay, sidaad adiguba ogtahay inaad Ubuntu ku rakibtay PC, maxaa yeelay gacaliyahaaga Arch uma oggolaan inaad Kiwix u adeegsato horay iyo gadaal toona. Intee in le'eg ayaad iskudayeysey? Ma waxay ahayd sida 3 maalmood sax?
Waqtigu waa lacag walaalkay. Waxaa laga yaabaa halkaan halka aad ka shaqeysid inaad waqtigaaga ku lumiso inaad isku daydo inaad wax ka dhigto wax shaqeynaya, laakiin ma ahan meelaha oo dhan, haddii aad fahanto waxa aan ula jeedo. Taasi waa sababta aan u isticmaalo Debian, maxaa yeelay waan ogahay sida loo dhigo wax kasta oo shaqeynaya iyada oo aan shaqo badan, dhakhso iyo xasilooni la hubo.
Maya, maahan wax la jecel yahay, ee waa in Arch + KDE uu ii ogol yahay inaan haysto qaabkii ugu dambeeyay ee wax walba, oo leh xasilooni aad u fiican (xitaa haddii aad inkirto ...), waana KISS ... sidaa darteed wax walba waan ka rakibi karaa xoq 🙂
Haa, waad isku dayday wax ka badan inta aan sameeyay, laakiin waxaad tahay isticmaale Gnome oo ma ahan isticmaale KDE, aan dhahno dano kala duwan ayaan leenahay.
Waxyaabaha Kiwix, lammaanaha fudud ... taasi waa in lagu rakibo serverka, goormaanse idhi in Arch uu ahaa distro fudud? Haa, waxay igu qaadatay waqti dheer anigoo isku dayaya inaan Kiwix ka shaqeeyo Arch, ugu dambayntii waxaan ma guuleysan ... hase yeeshe, waxaan ku qanacsanahay in nuucaan cusub ee Kiwix uu mar hore aniga si fiican iila shaqeyn doono, waxaan tijaabada ku sameyn doonaa laptop-ka maalmo yar gudahood, si aad u aragto 😉
Akhriso ereyadayda: Waqtigu waa Lacag. Gawaarida ciyaarta iyo nacasnimada: Qabow. Laakiin uma maleynayo in qof kasta oo 2 farood foodda ku haya uu tixgelinayo wax "ka daran". Miyaad qiyaasi kartaa shirkad ay tahay inay lumiso 2 illaa 3 saacadood oo kaliya si ay uhesho wax u fudud sida Virtualbox? Kiwix waa laga yaabaa inuu hadda shaqeeyo, laakiin markii loo baahday, ma ay shaqeyn. Taasi waa waxa aan ula jeedo. Qofka qatarta ah ma sugi karo qof katirsan Arch Community inuu go'aansado inay wax shaqeeyaan.
KISS waa ii qalantaa aniga (oo ii sheeg faa'iidooyinka ay ku siineyso), xirmooyinkeyga tijaabada ah aad baan u cusbooneysiiyey waana meesha aan ku weydiinayo isla su'aasha aad adigu tahay. markaan helo dhammaan xasilloonida, amniga iyo cusboonaysiinta aan u baahdo?
Aan aragno ... Aniguna ma waalan. Server-ka waxaan si cad ugu rakibayaa Debian Stable, isma dilo inaan ku rakibo Arch server-ka sidoo kale.
Waxaan ka door bidaa Arch in Imtixaanka, sababtuna tahay arch in arkeyga aan horey u lahaan doono xirmooyinka, in Archka aan wax ku hagaajiyo heer "hoose" (tusaale ahaan, modules kor loo qaadi doono, adeegyo, iwm, ama aad diidi doontid aniga in Debian-ka ay u yimaadaan adeegyo badan oo ay ka xishoodaan marka loo eego Arch?).
Waxaad haysataa xasilloonida, amniga iyo cusboonaysiinta aad u baahan tahay, Debian MA I siinayo si sax ah waxa aan jeclaan lahaa, Arch haa, in fudud. Tusaale ahaan, marka nooc cusub oo KDE ahi soo muuqdo (Waxaan xusayaa KDE maxaa yeelay waa sababta ugu weyn ee aan ugu qanacsanahay Arch) Tijaabinta waxay soo galeysaa goor dambe, waqti dheer ayey qaadataa, waxaan u baahnaan lahaa inaan isticmaalo Xasillooni ama wax ka sii xun .. . oo waxaad dhahdaa waxa rabaa lammaane, laakiin khibradeyda shaqsiyeed ee MY tijaabinta waqti dheer kahor kuma qanacsana, Xasiloonida xitaa ma doonayo inaan isku dayo ¬¬
Runtii, inbadan oo aan kusii wado isweydaarsigan macno darada ah, ayaa inbadan aan ogaadaa sida doodaha yar ee aad u difaacayso kuwaaga qaali distro.
Waxaan ka doorbidayaa Arch in ka badan Tijaabinta, sababtuna waxay tahay Arch-ka waxaan ku lahaan doonaa xirmooyinka ka hor, in Arch-ka waxaan ku habeeyaa waxyaabo heer “hoose” ah (tusaale ahaan, modules kor loo qaadi doono, adeegyo, iwm, ama waad inkiri doontaa aniga in Debian ay u yimaadaan adeegyo badan oo ay ka xishoodaan marka loo eego Arch?).
Macluumaadkaaga, Debian wuxuu leeyahay ikhtiyaar rakibo oo aad ugu eg Arch, halkaas oo aan ku rakibi karo oo kaliya waxaan u baahanahay, laakiin kaalay, masochists, horey ayaan kuu haysanay.
Waxaad haysataa xasilloonida, amniga iyo cusbooneysiinta aad u baahan tahay, Debian MA siiso wax sax ah waxa aan doonayo, Arch ayaa sameeya, taas oo fudud. Tusaale ahaan, marka nooc cusub oo KDE ah uu soo muuqdo (Waxaan xusayaa KDE maxaa yeelay waa sababta ugu weyn ee aan ugu qanacsanahay Arch) Tijaabinta waxay soo galeysaa goor dambe, waxay qaadaneysaa waqti dheer, waxaan u baahnaan lahaa inaan isticmaalo Deganaansho ama ka sii xun. ..
Horaan kuu sheegayaa. Waxaan arki doonnaa maalinta cusboonaysiinta badani ay nidaamka hoos u dhigi doonto. Waad ogtahay inaan qosol qosol leh ku hayo duugista ...
oo sheeg waxaad rabto lamaanahaaga, laakiin khibradeyda shaqsiyadeed ee MY ee tijaabinta waqti dheer kahor kuma qancin, Deganaansho xitaa ma doonayo inaan isku dayo ¬¬
Waxaanan ku laabanay isla wixii aan kuugu sheegay faallo kale. Mar dambe uma qalmo doodaha qof illaa iyo dhowr bilood ka hor difaacay iligga iyo ciddiyaha Ubuntu, haddana isaga ku weeraraya isaga oo difaacaya qaybinta kale. Akhristayaasha u sheeg inta goor ee ay ahayd inaad tijaabisay Tijaabinta .. Sababtoo ah inta aan ogahay, waxay ila tahay in Tijaabadaada ay la socdeen Debian Sarge, ama Debian Etch .. Immisa ayey le'eg tahay roobka ilaa waqtigaas? Etch, Lenny, Tuuji oo hadda Wheezy.
Si daacadnimo ah, waa halkaan dooddaydu ku timid. Markaad dood adag yeelato, waad ogtahay halkaad iga heli karto 😀
Waan difaacay waanan difaacayaa wixii Ubuntu ahayd dhawr sano ka hor, imika wax shilimaad ah kuma siinayo. Miyay tahay inaan difaaco astaanta ama magaca halkii badeecada? Waan ka helay Ubuntu 8.04, 8.10, xitaa 9.04, way fiican yihiin, laakiin markaa waxay bilaabeen inay ii keenaan dhibaatooyin xasilloonida, taasi waa sababta aad u leedahay: "Waan ku garaacayaa", si fudud maxaa yeelay ma jecli waxay noqotay, oo waxaan aaminsanahay naftayda DHAMMAAN xuquuqdayda inaan ku oggolaado ama ku diido wax.
Xaqiiqdiina marwalba waan cadeeyaa inaan kahadlo khibradayda, waana inay noqotaa sidaas maxaa yeelay uma hadli karo dadka kale. Ubuntu 10.10 wuu igu dhintey, halka isticmaaleyaasha kale ay sifiican u shaqeeyeen ... wey fiicnaayeen iyaga, aniga ayaa iska hadlaya.
Waxa sida muuqata aadan jeclayn ayaa ah waxaan idhi difaaca Ubuntu iyo midig xaq? HAHAHA !!!!
Oo haa ninyahow waan ogahay, waxay afkaaga ka dhigeysaa biyo si aad ugu maleyso in 'pacman -Syu' nidaamku iga dhigo mid burbura, si fiican ... qof walbaa wuxuu doonayaa wax, inkasta oo marar badan aan la fulinin HAHA.
Si kastaba ha noqotee aan aragno ... CourageImisa jeer ayuu nidaamku burburay ka dib markii la cusbooneysiiyay Arch?
Midna Markuu nidaamkeygu jabo, waxay ugu wacneyd taabashada waxyaabo ay ahayd inaanan helin.
Elav, wax kasta oo aad cusbooneysiiso cusbooneysiintu maahan feker la'aan, inaad dhaqaajiso Tijaabinta, taas oo aan qasab ahayn, dhab ahaantii anigu ma haysto inay shaqeysiiso mana ahan sababtaas awgeed kuwa Arch waxay u soo direen dufan iyo kufsi xun oo i kufsanaya.
Mana ahan inaan sameeyo si aan u ogaado midka xasilloon. Hore ayaan u ogahay taas: Debian.
Debian on Stable, jooji hadalka oo samee tijaabo isbarbardhigaya Arch iyo Debian Sid, haddii aad rabto xitaa waan ku wareejin karaa Aan Isticmaalno Linux halkan.
Xitaa aniga iguma dhacdo in aan Server ka sameeyo Arch, marka hore maxaa yeelay serverka waxaan doorbidaa in si qoto dheer laygu tijaabiyo iyo tan labaad maxaa yeelay serverka da'da xirmooyinka ayaa igu dhaca
sababta kaliya ee aad u isticmaashid Arch, waa sababta oo ah sida aad adigu leedahay, KDE waxay ka shaqeysaa halkaas si ka wanaagsan wixii kale ee aad isku dayday
In Gentoo waxay si fiican u shaqeysaa maxaa yeelay way ka KISS badan tahay Arch, qaanuunkaas oo ah seddex KZKG ^ Gaara ayaa adeegsan doonta Gentoo
Mudo intee leeg ayaad iskudayeysey? Ma waxay ahayd sida 3 maalmood sax?
Haddii aad rabto inaad rakibto Arch sababtoo ah laba saacadood ugu badnaan waxaad leedahay Arch + Kdebase oo socda, ii sheeg Gentoo inay tahay wax kale, halkaas waxaad u baahan tahay dhowr maalmood oo rakibid ah
Waqtigu waa Lacag. Arch in lagu ciyaaro iyo nacas agagaarka
Waqtigaaga ayaad lumineysaa haddii aad rakibtid Kde dhammaystiran ama Gnome dhammaystiran, taas oo iila muuqata dhammaystir bulsheed aniga maaddaama aad KISS rarto adoo rakibay kun shey oo aadan u baahnayn.
Waxaan horeyba kuugu sheegayaa inaadan lumin wax kabadan laba saac
Baakadeyda ku jira Imtixaanka aad ayaan ula socdaa waana meesha aan ku weydiiyo isla su'aashaada. Maxay tahay sababta loo isticmaalo Arch, markaan haysto dhammaan xasilloonida, amniga iyo cusbooneysiinta aan u baahanahay?
Tijaabinta Debian maahan sii deyn isku shaandheyn ah, ma aanan tijaabin si aan u hubiyo laakiin waa waxa aan fahmay
Macluumaadkaaga, Debian wuxuu leeyahay ikhtiyaar rakibo oo aad ugu eg Arch, halkaas oo aan kaliya ku rakibi karo waxa aan u baahanahay
Tani waa been sida cathedral, Rakibaadda Debian Stable waa wax aan ka badnayn soo socda, xiga, rakibaadaha xiga. Waan awooday inaan ku hubiyo Debian Lenny.
Ma aanan jeclayn Debian sababtoo ah dulqaad la'aanta baakadaha oo leh waxa ugu yar ee diiwaangashan, taasi waa sababta aan u saaray
Horaan kuu sheegayaa. Waxaan arki doonaa maalinta ay cusbooneysiin badan ay nidaamka hoos u dhigi doonto
Keydso tan: Maalinta igu dhacda, waxaad noqon doontaa qofka ugu horreeya ee ogaada
Kadib waxay bilaabeen inay ii keenaan dhibaatooyinka xasiloonida, taasi waa sababta aad udhahdo: "Waan kufsaday" isaga, si sahal ah maxaa yeelay ma jecli waxa uu noqday, waxaanan aaminsanahay DHAMMAAN xuquuqdayda inaan wax ku oggolaado ama aanan ku raacin.
Tani waa isla sababta aan u weerarayo Ubuntu, waxaanan ku darayaa tan ubunto.
Had iyo jeer waxaad la jirtaa wax isku mid ah, dhammaan qoraalada waxay noqdaan Arch Vs X distro ama Debian Vs X distro.
Maamule ahaan inaad tahay, waa inaad tan joojiso oo aad furtaa boostada Debian Vs Arch oo aad ka hadashaa maxaa yeelay inta badan kama hadashid meesha ugu haboon
Tani waa waxa kaliya ee aan uga faaloon doono arimahan oo dhan .. Debian Lenny waa nooc duug ah, sax? Ma kugu dhacday si la mid ah KZKGGaara oo isku dayay wax kun sano ka hor welina u maleeya inay taasi wali sidii hore tahay tan iyo markaas? Hagaag, waxaan kugu martiqaadayaa inaad soo dejiso iso Debian ah oo raadi ikhtiyaarka: Khabiir Ku rakib.. Aan aragno sidaad u aragto beenta weyn ee aan qabo.
Sababtoo ah Virtualbox wax badan ayuu ciyaarayay khiyaanada haddii kale haddii aan isku dayo.
Sikastaba, duuduubku waa la waayey.
Waxa aan isku dayay Lenny waxay ahayd rakibaada qaabka qoraalka, waxayna umuuqatay sida ugufiican aduunka. Waqtigaas ma aanan aqoon Arch
Haddii aan ka careysiiyo xirmo kasta oo aan shaqeynin waqti cayiman .. uff. Debian hadda waxay leedahay wareeg si dhakhso leh loo cusbooneysiiyo, laakiin dhowr jeer oo hore ka hor .. ilaah baan ku dhaarshee Haddii dhibaato kaa haysatay, waa inaad sugto bilo inta xal laga helayo.
Aad bad elav, waxaad kahadashaa Archlinux sida haduu qasan yahay, tusaale ahaan desktop-ka aan jecel nahay, marka hore waxay ku tijaabiyaan repo [gnome-unstable] kadib maalmo baaritaano ah oo ku lug leh (warbixinada bugta, sixitaanka, iwm) ee repo [tijaabinta] halka ay marayso tijaabooyin kale oo taxane ah, si loo gaaro [extra] repo
Marka dhammaan baakadaha, kombuyuutarradu waxay leeyihiin laantooda oo aan degganeyn, laakiin kuwa aan la tijaabin, oo kaliya markay u shaqeeyaan sidii loogu talagalay, baakadaha ayaa tagaya xuddunta ama keydka dheeriga ah iyadoo ku xiran xirmada.
Bakhaarka [multilib] iyo [comunity] wuxuu leeyahay meelahooda tijaabada ah. Faalladaada, waxaad muujisay inaadan wax badan ka aqoon archlinux ama aad u xanaaqsan tahay isaga, sabab kasta ha noqotee, isagu si sare ugama hadlayo adiga elav.
Jo iyo maanta sida Masiixiyiintu yiraahdaan, wakhtiyada Ilaah waa qumman yihiin. Ka dib markaan faalleeyo waxaan sameeyay pacman -Syu oo oh cusbooneysiinta xorg-serverka ayaa soo baxday, waxaan isku dayay tijaabooyin dhowr usbuuc ka hor waxayna jabisay jawiga garaafka, dhibaatooyinka bugta xorg cusub iyo waliba lahaanshaha wadayaasha nvidia, goor dambe oo ay soo baxayaan xalka, laakiin waa tan.
Qaanso-softiweerka waxaa loo isticmaalaa si aad u wanaagsan oo la cusbooneysiiyey, oo haddii aad ku jahwareerto imtixaanka ama xasilloonida aan xasillooneyn, waa inaad ogaataa inay tahay baaritaanka iyo inaad dhab ahaan heshay cayayaanka qaarkood. laakiin waxa gaara xudunta, dheeriga ah, xitaa bulshada ayaa sifiican u gaarto kana soo horjeedda waxyaabaha ugu caansan ee dhowaan la soo dhaafay, barnaamijyada xasiloon iyo archlinux laftooda.
Sida dhammaan distros .. Waxbaa qaldan ka dibna way saxaan 😀
Waxba kama haysto Arch, runtii waan xardhayaa booska nin (KZKG ^ Gaara) taas oo ah waxa ay u maleynayaan in waxa uu adeegsanayo ay ugu fiican yihiin. Anigu si fiican uma aanan tijaabin Archlinux, laakiin kaalay ninka, waa inuu jiraa wax yar oo qalad ah maxaa yeelay waxba ma fiicna. Waxaa laga yaabaa inaadan ku haysan qalabkaaga, laakiin qof kale sidoo kale. Isla sidaas oo kale ayaa loogu talagalay dhammaan mashiinnada.
Aniguna marwalba waan kuu sheegi jiray inaan kahadlayo aragtidayda, khibradayda. Arch ilaa iyo hada wax yaab leh ayuu ii sameeyaa, waxaan maanta kuu sheegay saacado yar ka hor, "waqti yar ka hor ma aanan dareemin raaxo iyo farxad aan ku qabo laptop-ka", tusaale ahaan, hadda waxaad rakibtay OpenSuse waxayna la shaqeysaa waxyaabo yaab leh, aniga ayaa rakiba oo wax walbo way qaldamayaan qalabkeyga awgood (tusaale ahaan), waxaan dhihi doonaa ma jecli oo waxaad oran doontaa haa. Labaduba waanu saxanahay ...
Ah laakiin wali waad Tag qado tag
Marwalba waan isticmaalaa SID mana haysto wax dhibaato ah oo ah 'XDD' marka laga reebo marka aan qaabeeyo ...
Hada waxaan ahay sidii 1 ama 2 sano oo hore xd
Elav iyo KZKG ^ Gaara ma sulk……
Hahaha si fiican ayaad ula qabsan kartaa sababtoo ah taasi waa caadi Hahahahaha
Hahaha, haddii aan adiga ahaan lahaa, waan la qabsaday waayo taasi waa caadi hahaha .. Naa, laakiin waa doodo caafimaad leh .. Maalintii aan sidan ku saluugo, waxaan gooyay xarigga shabakadda 😀
Markaad la kulantid qaladkan: dpkg waa la joojiyay, waa inaad gacanta ku haysaa 'dpkg –configure -a' si aad u saxdo dhibaatada, maxaan sameeyaa?
Ku jawaab kamila
Kusoo dhawow kamila:
Hagaag, waxaad fureysaa terminal oo asal ahaan waxaad u fulineysaa:
Ama waxaad si fudud u fulisaa amarka laga hadlayo sudo….
xididka @ debian: / # apt-get -t tijaabo ah rakib libreoffice
Miguel linares sawirka meeleynta dijo
Haye fiiri, ma i caawin lahayd laakiin waxay ku taal Canaima
Ma ii sheegi kartaa sida loo saxo looxyada, menus-ka iyo wixii ka jira Canaima, fadlan ka jawaab fariinteyda
Ku jawaab Miguel linares
laakiin waxaan rabaa inaan rakibo shabakada internetka ee chromium laakiin qalad ayaan ku helayaa markaan ku tijaabiyo saldhiga waxaanan naftayda u sheegay tan si aan ugu rido salka terminal apt-get install - hadaan koobiyeeyo laakiin dhamaadka marka la rakibayo. had iyo jeer soo baxa Khaladaadkaan waxaa la helay markii la shaqeynayay:
E: Nidaamka hoose / usr / bin / dpkg wuxuu soo rogay qalab khalad ah (1)
sideen ku hagaajin karaa fadlan ii sheeg
Ku jawaab edward
Iyada oo ay la socoto terminaalka: Kalandarka iyo Cal.
Ma jeceshahay gawaarida? Isku day xawaare riyooyin ah 2.0 Beta 1